सरकार डर देखाउने रणनीतिमा लागेको हो कि आफै डराउन थालेको होला ? - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
सरकार डर देखाउने रणनीतिमा लागेको हो कि आफै डराउन थालेको होला ?
२०७७ फाल्गुन ११, मंगलवार १६:२१:००
काठमाडाैँ। अहिले नेपालको राजनीति के होला भनेर जनता कौतुहलपूर्ण अवस्थामा छन् । सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा पक्ष–विपक्षको बहसपछि अब फैसला आउने क्रममा छ ।
वकिलहरूले लिखित बहस नोट पेस गरिसकेकाले अब जतिबेला पनि फैसला सार्वजनिक हुन सक्छ । फैसला संसद् विघटनको पक्षमा आउँदा के होला र विपक्षमा आउँदा देशको राजनीतक माहोल कस्तो होला ? भन्ने चासो र आँकलन हुन थालेका छन् । यसै मेसोमा हिँजो फागुन १० गते प्रधानसेनापति पूर्णजंग थापाले सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्ययाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई भेट गरेका छन् । यो भेट केका लागि भएको हो भन्ने कुरा थाहा भएको छैन तर सुरुमै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै सेटिङ मिलेको छ, चुनाव भएरै छाड्छ भन्दै आएकाले प्रधानसेनापतिको प्रधानन्यायाधीशसँगको भटलाई आशंकाको रूपमा हेरिएको छ ।
अर्को, प्रधानमन्त्रीले आज सुरक्षा परिषद्को बैठक डाकेकाले आमजनसमुदायका साथै राजनीतिक वृत्तमा शंका उत्पन्न गराएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्ति र यी कार्यले सरकारले आमजनता र सरकारबाहिरको राजनीतिक वृत्तलाई तर्साउने र माहोललाई त्रासपूर्ण बनाउने रणनीति बनाउँदै गरेको हो कि आफै डराएको हो ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपा नै विभाजन भयो । पार्टी विभाजनपछि नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्को दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वयबीच पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरह्यो । अहिलेसम्म पनि सो क्रम चलिरहेको छ । एक–अर्को पक्षले नेता तथा कार्यकर्ता आफ्नो पक्षमा पार्न कसरत गरिरहेका छन्, गर्ने नै भए ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भनेर विरोध प्रदर्शन त गरेको छ तर अदालतको आदेशलाई मान्ने भन्दै आएको छ । मधेस कन्द्रित राजनीतिबाट राष्ट्रिय रूप लिँदै गरेको जनता समाजवादी पार्टी पनि अदालतको आदेशलाई मान्ने मानसिकतामा छ । त्यस्तै दाहाल–नेपाल समूहले आन्दोलनको आँधी ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकार डराउनुपर्ने अवस्था थिएन । यस्तो अवस्थामा प्रधानसेनापतिलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न पठाउनु तथा सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउनु ओलीको सरकारबाहिरका सबै पक्षलाई त्रासमा पार्ने रणनीति हुनसक्छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डराउने भनेको नागरिक समाजको बृहत् आन्दोलनबाट हो ।
नागरिक अगुवा, बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार संलग्न आन्दोलनले कुनै पनि हालतमा संवैधानिक कदम सुधारिनुपर्छ भनेको छ । अर्को, यति मात्रै होइन ओलीका संवैधानिक आयोगको नियुक्तिदेखि अन्य कदमलाई पनि असंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक भन्दै ती सबैका विरुद्ध आन्दोल गर्ने बताइरहेको छ । यसले केपी ओलीलाई दबाब त दिन्छ तर सेनासम्मको संलग्नको विषय यो हुन सक्दैन ।
सुरुमा सबै सेटिङ मिलेकाले निर्वाचन आयोगले आफूलाई नै आधिकारिकता दिन्छ भन्दै सरकार पक्ष हिँडिरह्यो । अदालतले पनि आफूले चालेको कदम सदर गर्छ चुनाव हुन्छ भनिरहेका ओलीले पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगलाई दबाबकै भाषामा सूर्य चिह्न आफ्नै भएको र त्यसो नभए आन्दोलन गरिने बताए । विराटनगरमा भएको जभेलामा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला नगरे आन्दोलन गर्ने बताए । अदालतले जनतालाई देखेर फैसला गर्लासमेत भने तर पछिल्लो समय उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले अदालतको आदेश पालना गर्छ भनेका छन् । ओली आफैले पनि पछिल्लो समयमा सरकारले आन्दोलन गर्दैन भन्न थालेका छन् ।
यी सबै परिवेशलाई हेर्दा केपी ओली र उनको सरकारका मन्त्रीहरू निर्वाचन आयोगले कुनै पक्षलाई पनि आधिकारिकता दिन नसक्दा सायद सूर्यचिह्नबिना नै निर्वाचन लड्नु पर्ने हो कि भन्ने त्रासमा देखिन थालेका छन् । अर्को, सर्वोच्च अदालतको बहसमा पनि सरकार पक्षका वकिलको तर्क कमजोर देखिएकाले संसद् पुनस्थापनाको पक्षमा फैसला गर्छ कि भन्ने आशंकामा देखिएका छन् । हिँजोको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले त्यस्तो संकेत गरेको छ । यी सबै अवस्थाका कारण सरकारले जनता र सरकारबाहिरको राजनीतिलाई सशंकित बनाउन पनि पछिल्लो घटना बन्न गएका हुन सक्छन् । सरकारले गलत बाटो नलिए तत्काल देशमा केही हुने अवस्था भने छैन ।